【 CODES GENSHIN IMPACT 】 Yakagadziridzwa NHASI ▷ Chikunguru 2022
Claymores uye Mandobles
Codes ose Genshin Impact
Hi Adventurer! Sezvo uri kutsvaga macode emubairo uye munguva pfupi matombo anokosha mukati Genshin Impact pano ndichakusiira runyoro rwakasiyana-siyana rweizvi, yeuka kuti mamwe anogona kupera, adzikinure nekukurumidza uye mamwe ari echokwadi zvichienderana nedunhu, ndinokurudzira kuti uedze ese, sezvo isu tine chokwadi chekuti 80% yeizvi. mazita emakodhi ari Kugara Achishanda . Usakanganwa kuti unoona guides, inoshanda mepu, zvinhu, makwakwakwa esimbi, armas, mavara, vavengi, mamishoni, archaji, curiosities nezvimwe pamusoro genshin impact pawebhu
Rondedzero Yemakodhi Anoshanda e Genshin Impact
GENSHINCHIPO: 50 emahara Protogems uye 3 gamba wits.
SBNBUK67M37Z: 30 Protogems uye 5 yemahara adventurer EXP zvinhu (chete zvinoshanda kune vatambi vatsva kamwe chete).
MS7C3SV8DMZH: 60 emahara Protogems uye 5 Adventurer Zvakaitika (kodhi yakawanikwa munaKurume 29, ichiri kushanda).
AB7CKBVQULE5: Iwe unowana zana emahara maProtogem uye gumi zvisinganzwisisike kunatsa zvicherwa (zvinoshanda chete kusvika Kurume 100).
LBNDKG8XDTND: Iwe unowana zana emahara Protogems uye gumi zvisinganzwisisike kunatsiridza ore (inoshanda kusvika Gumiguru 100, 10)genshin1006u - iwe unowana makumi matatu protogems + gumi nemashanu emahara Adventure EXP (inoshanda chete muEurope).
genshin1006a - iwe unowana makumi matatu protogems + gumi nemashanu Adventure EXP yemahara (inoshanda chete muAmerica).
genshin1006s - Iwe unowana makumi matatu eProtogems + gumi nemashanu Adventure EXP yemahara (inoshanda chete muAsia).
GenshinMHY0O - iwe unowana makumi matatu protogems emahara (inoshanda chete muEurope).
GenshinMHY0M - iwe unowana makumi matatu protogems emahara (inoshanda chete muAmerica).
GenshinMHY0I - iwe unowana makumi matatu maprotogem emahara (anoshanda chete muAsia).
GENSHINMHY0O - iwe unowana makumi matatu protogems mahara (chete anoshanda kuPC uye nharembozha).
GenshinZHB30 - iwe unowana 160 protogems yemahara.
Genshin0928N - iwe unowana makumi matanhatu eprotogem uye zviuru gumi zvemabheri zvemahara (anoshanda kumaseva eAmerica chete).
Genshin0928E - iwe unowana makumi matanhatu eprotogem uye zviuru gumi zvemabheri zvemahara (zvinoshanda chete kumaseva eEurope).
Genshin0928A - Iwe unowana makumi matanhatu eprotogem uye zviuru gumi zvemabheri zvemahara (anoshanda kumaseva eAsia chete).
GENSHIN1111 - iwe unowana makumi matanhatu eprotogem uye zviuru gumi zvemabheri zvemahara (zvinoshanda kune wese munhu).
GENSHINCHIPO - iwe unowana makumi mashanu protogems uye 50 zvinhu zvechiitiko kune ako mavara mahara.
GENSHIN1006A - iwe unowana makumi matatu protogems uye 30 ruzivo mapakeji emahara (anoshanda chete kumaseva muAmerica).
GENSHIN1006U - iwe unowana makumi matatu protogems uye 30 ruzivo mapakeji emahara (anoshanda chete kumaseva muEurope).
GENSHIN1006S - Iwe unowana makumi matatu protogems uye 30 ruzivo mapakeji emahara (anoshanda kuAsia maseva chete).
GOLNXLAKC58 - iwe unowana makumi mashanu protogems yemahara (inoshanda kusvika Mbudzi 50, kumatunhu ese nemidziyo).
ZVIZVO - iwe unowana makumi matanhatu eprotogem uye zviuru gumi zvemabheri zvemahara (zvinoshanda kune wese munhu).
nBEm3myAL2b - iwe unowana makumi matanhatu eprotogem uye zviuru gumi zvemabheri zvemahara (zvinoshanda kune wese munhu).
G3tQq6TOqmE - iwe unowana makumi matanhatu eprotogem uye zviuru gumi zvemabheri zvemahara (zvinoshanda kune wese munhu).
5KVeIbSxDUU - iwe unowana zana maProtogems uye gumi Mystic Boost Minerals mahara (anoshanda kune wese munhu).
jsSK8n23jzR - iwe unowana zana maProtogems, gumi emahara asinganzwisisike ekusimbisa zvicherwa (anoshanda kune wese munhu).
153YUSAENH - iwe unowana makumi matatu maProtogems uye 30 Adventurer ruzivo zvinhu zvemahara (zvinoshanda kune wese munhu).
dU2mhjQL1ZT - iwe unowana zana protogems uye mashanu emahara EXP zvinhu (zvinoshanda kune wese munhu).
GSIMPTQ125 - Iwe unowana zana nemakumi mana maProtogems, zviuru gumi zveBlackberries, 140 Adventurer EXP zvinhu, uye matatu Gamba Ingenuity zvinhu.
153YUSAENH - Iwe unowana zana nemakumi mana maProtogems, zviuru gumi zveBlackberries, 140 Adventurer EXP zvinhu, uye matatu Gamba Ingenuity zvinhu.
GENSHINCHIPO - Iwe unowana zana nemakumi mana maProtogems, zviuru gumi zveBlackberries, 140 Adventurer EXP zvinhu, uye matatu Gamba Ingenuity zvinhu.
GENSHINCHIPO - 50 Protogems uye 3 emahara gamba wits.
GSIMPTQ125 - 60 Protogems uye zviuru gumi zveblackberries zvemahara.
153YUSAENH - 30 Protogems uye 5 Adventurer Zvakaitika zvemahara.
KTNSCQWW922M - 100 Protogems uye gumi emahara zvisinganzwisisike kunatsiridza zvinhu.
ET7ADQFF8KJR - 100 Protogems uye mashanu emahara Gamba Ingenuity.
PSNTC8FEQK4D - 100 Protogems uye 50.000 yemahara Mora.
GS6ACJ775KNV - 60 Protogems uye zviuru gumi zvemahara Blackberries.
TT7BVJNPL249 - 60 emahara maProtogems.
ATPTUJPP53QH - zana emahara maProtogems uye zviuru makumi mashanu mabheri.
CBNXRD6S7H3N - zana emahara maProtogems uye zviuru makumi mashanu mabheri (anoshanda chete mudunhu reChina).
4BNSD3675J8D - 100 emahara Protogems uye mashanu magamba wits.
EBPWQU6SNZ22 - 100 emahara Protogems uye mashanu gamba wits (chete anoshanda mudunhu reChina).
FS6SU367M279 - 100 emahara maProtogems uye gumi ekugadzirisa zvinhu.
2T7E9CPA7YJE - 100 emahara maProtogems uye gumi ekunatsiridza zvinhu (zvinongoshanda mudunhu reChina).
WTNTBYSZJNRD: 100 emahara Protogems uye kunatsa ore x10.
8A6ABTH2N9Z: 100 emahara Protogems uye gamba wit x5.
UTNBBGSZ3NQM: 100 emahara Protogems uye 50.000 mabheri.
© 2022 Codes Genshin Kodzero dzese dzakachengetwa